င ဝန် န ဒီ: May 2009
Posted: 22 May 2009 0352 hrs
Japanese school girls wearing facemasks are pictured in Kyoto
TOKYO: Japanese Prime Minister Taro Aso on Thursday again urged the public to stay calm asatotal of 292 H1N1 flu cases were reported, including the third in greater Tokyo, the world's largest urban area.
Public broadcaster NHK reported that the total number of A(H1N1) cases in Japan had reached 292, slightly ahead of the latest official health ministry tally of 282 cases by late Thursday.
The city confirmed another case late Thursday inawoman in her 30s who recently visited the US city of San Francisco. She lives in the central Tokyo ward of Meguro.
Masato Tashiro,aJapanese virologist on the WHO emergency panel, told reporters in Geneva that it was "no surprise" to see flu cases in Tokyo, adding that "quarantine control cannot be 100 percent perfect." - AFP/de
Dubai Tourism Coping With Downturn?
Sky's Gulf Correspondent, Ashish Joshi, investigates how the Emirates' crucial travel sector is coping with the economic downturn.
Flames Burst High Into Moscow Night Sky
Gas supplies in south-west Moscow have been shut off afteradramatic pipeline explosion. Several people were injured and more than 30 teams of firefighters were sent to the scene. This video has no commentary.
On A High: Tightrope Walkers Compete
Daredevils braved high winds as they walked acrossa1km tightrope aboveaSeoul river for the World High-Wire Championships. The fastest walker was Switzerland's Alfred Nock Junior, who made it to the other side in 10 minutes and 17 seconds.
ဂျပန်မှာ ၀က်တုပ်ကွေး စဖြစ်နေပြီ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်သူများ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှိနေပြီလို့ အတည်ပြုကြေညာပါတယ်။ ကျောင်းဆရာ တယောက်နဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား နှစ်ယောက်တို့မှာ H1N1 ရောဂါပိုး တွေ့ရှိရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ်ချီကန် ပြည်နယ် ဒီထရွိတ်မြို့ကပြန်အလာ တိုကျိုကို အရောက် တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်နေလို့ သူတို့ကို ဆေးရုံတင်ထားရကြောင်း ဂျပန် ကျန်းမာရေးဌာနက ဆိုပါတယ်။
သူတို့ခရီးစဉ်အတွင်း ကနေဒါနိုင်ငံကိုလည်း ၀င်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှာလည်း H1N1 ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်နေသူတယောက် သေဆုံးသွားပါတယ်။ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ အဲဒီအမျိုးသမီးမှာ တခြားရောဂါများလည်း ရှိနေတာ မို့ သေဆုံးရတဲ့နေရာမှာ အဲဒီ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါက ဘယ်လောက်အထိ ပါဝင်လဲဆိုတာ သေချာမသိရဘူးလို့ ကျန်းမာရေး တာဝန်ခံများက ပြောဆိုပါတယ်။
မက္ကဆီကိုမှာ နောက်တယောက် သေဆုံးပြန်လို့ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါနဲ့ သေဆုံးသူ ၄၅ ယောက် ရှိသွားပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံမှာ ရောဂါပိုး ငြိနေသူ ၂,၅၀၀ လောက်ရှိပြီး အများစုကတော့ မက္ကဆီကို နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:28 AM No comments:
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဒေသ စောင့်ရှောက်မည့် နာဂစ် မျိုးဆက် သစ်
သောကြာနေ့၊ မေလ 08 2009 20:37 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ “ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေလား၊ ပေါမှပေါ ဆရာမရေ” ဟု လပွတ္တာမြို့နယ် ပြင်စလူဒေသ ကျေးရွာတရွာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦးဖြစ်သူ မလွင်လွင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ သူက အသက် ၂၄ နှစ်၊ ကလေး ၃ ယောက် မိခင်။ ယခုလည်း နောက်ထပ်တယောက် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ထားလိုက်သေးသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ် ခံထားရသော်လည်း သူတို့ မိသားစုလေးမှာ ကံကောင်းထောက်မစွာ မပျက်စီးခဲ့ပေ။ အစဉ်အလာအရ ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် သူ့မိသားစုသည် အခြား မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ မိသားစုများကဲ့သို့ စီးပွားရေး အခက်အခဲကိုတော့ ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဘုရားပေးသဖြင့် ရရှိလာသည့် ကိုယ်ဝန်ကို မုန်တိုင်းပြီးသည့်အခါ လွယ်ထားရကြောင်း မလွင်လွင်က ပေါ့ပါးစွာပင် ဆိုလိုက်သေးသည်။
လက်ရှိ ကိုယ်ဝန် ၃ လသား အရွယ်၌ ကျန်းမာရေးဌာနသို့ သွားရောက်ကာ မေးခိုင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး တကြိမ် ထိုးပြီး၊ အဝါရောင်နှင့် အနီရောင်ဆေး ၂ လုံးအား သားဖွားဆရာမက ပေး၍သာ သောက်ရသည် အမျိုးအမည် မကွဲလှ။
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်တွင် ကလေး ၃ ယောက်နှင့် နောက်ထပ် တယောက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသူ သူက သားဆက်ခြားခြင်းကို မသိကြောင်း ပြောသည်။
“ကျန်းမာရေး ဆရာမနဲ့ ဆရာတယောက် ရှိတယ်။ မွေးရင်တော့ သူတို့နဲ့ မွေးမှာပါ။ သူတို့ မရှိရင်တော့ အရပ်လက်သည်နဲ့ မွေးမယ်” ဟု မလွင်လွင်က သူ၏ စတုတ္ထမြောက် ကလေးကို မွေးဖွားရန် စီစဉ်ထားပုံကို ပြောလာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသများ၌ ဆရာဝန်ဆိုသည်မှာ ရှားပါးကုန်စည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေခဲ့သည်က ကြာလေပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိဘဲ၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့သော ကျေးရွာများသို့ မည်သည့် ဆရာဝန်များ လာချင်ကြမှာပါလိမ့်။ ယခင်တုန်းကလည်း မရှိ၊ ယခုလည်း မရှိ။
သားဖွား ဆရာမဆိုသည်က ၁ဝ တန်းအောင်လျှင် သင်တန်းတက်ပြီးနောက်၊ ကျေးရွာသားများအတွက် အဓိက အားကိုးရသည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သည့် လုပ်သားများ ဖြစ်လာကြသည်။
လပွတ္တာမြို့နယ်ထဲမှာ ပြင်စလူမှာ တိုက်နယ်ဆေးရုံ ရှိသည်။ မလွင်လွင်၏ ကျေးရွာမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်ပါက နာရီဝက်ခန့်အကြာ သွားရပြီး၊ စက်လှေဖြင့်ဆိုလျှင် မိနစ် ၂ဝ ခန့်သာ သွားရသဖြင့် တော်ပေသေးသည်။
“ဟိုတလောက ရွာက ကောင်မလေးတယောက် လက်သည်နဲ့ မမွေးနိုင်လို့ ဆေးရုံပြေးရတယ်။ အဆင်ပြေသွားပါတယ်” ဟု မလွင်လွင်က သူ၏ စိတ်သက်သာရာ ရပုံကို ပြောပြသည်။
လွယ်ထားရသည့် ကိုယ်ဝန်ကို မည်ကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်သလဲဟု လေ့လာစူးစမ်းကြည့်ရာ၊ သူက တခစ်ခစ် ရယ်သံနှင့်အတူ ''ဒီအတိုင်းပဲ ထားပါတယ်။ မပြောတတ်ဘူး'' ဟု တုံ့ပြန်ဖြေဆိုသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလဆန်းတွင် အညှာအတာ ကင်းမဲ့စွာ တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်း နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်စလူသည်ကား ယခင်လို မစည်ကားတော့။ သည်နေရာ၌ပင် ဆက်လက် နေထိုင်လာသည့် မလွင်လွင်က အားဆေး သောက်ချင်သော်လည်း ဆေးဝယ်ရန် အခက်အခဲ ရှိနေသည်။
“ပြင်စလူက နာဂစ်နောက်ပိုင်း မစည်တော့ဘူး။ ဆေးလည်း စုံစုံလင်လင် မရပါဘူး။ လိုချင်ရင် လပွတ္တာကို မှာရတယ်။ ဒီမှာကတော့ တောဆိုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆိုပေမယ့် အားဆေးတွေ ဘာတွေ မသောက်ပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
''ဆေးမရှိတာရော၊ နောက် …'' ဟု ဆိုကာ၊ စကားသံ ထွက်မလာတော့။ ခြောက်ကပ်ကပ် ရယ်သံသာ ပေါ်ထွက်လာသည်။
ငွေကြေးချို့တဲ့ခြင်းကို ဖုန်းထဲမှ မေးနေသည့် ကျမကို သူ့ဘက်က ပြောလိုဟန်မရှိ။ သို့သော် သူ့လေသံက ပြောပြီးသွားသလိုပင် ထင်မှတ်လိုက်ရသည်။
ကလေး ၃ ယောက်က တနှစ်ကြီး တနှစ်ငယ်များ။ ကျေးလက်အများစု ထုံးစံအတိုင်း ငယ်ရွယ်စဉ်၌ပင် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့် သူသည် သားဆက်မခြားဘဲ ဘာကြောင့်များ အဆက်မပြတ် မီးဖွားရပါလိမ့်။
“အခုတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းကို သံဓာတ်အားဆေးနဲ့ ဗီတာမင်အေ တိုက်ပါတယ်။ ကလေး အနေအထားကို တလ တခါလောက်တော့ စစ်ပေးပါတယ်။ အခုဟာက ရွာတွေကို လှည့်ပြီး ကြည့်နေရတယ်။ နာဂစ်နောက်ပိုင်းမှာ ဆရာမက ရှားသွားတယ်” ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ် ကျေးရွာတရွာမှ သားဖွားဆရာမ တဦးက ဆိုသည်။
သားဆက်ခြား ကျန်းမာရေးက သူတို့အတွက် အခက်အခဲ ရှိနေသည်။ သားဆက်ခြားနည်းက အချိန်မှန် စနစ်တကျ ဆေးထိုးဆေးသောက် ပြုလုပ်ရမည်။
“သားဆက်ခြားဖို့က အချိန်မှန် ဆေးထိုးဆေးသောက်ဖို့။ နောက် ဆေးအလုံအလောက် ရဖို့က အခက်အခဲ ရှိတယ်။ အဓိက က ဆေးမရှိတာပါ” ဟု ဆရာမက ဆက်ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း PSI သည် သားဆက်ခြား ဆေးများကို သူတို့ထံ တဆင့်ခံ ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဆေးခန်းများမှတဆင့် ဖြန့်ဝေပေးနေသည်။ သို့သော် ဆေးခန်းပိုင်ရှင် ဆရာဝန်တဦး အဆိုအရ ဆေးလောက်ငသည်ဟူ၍ မရှိပေ။
မြို့ပေါ်ဒေသများတွင် သားဆက်ခြားခြင်း လွယ်ကူသော်လည်း ကျေးလက်ဒေသများ အထူးသဖြင့် နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဒေသများတွင် မလွယ်ကူ။
မလွင်လွင်ကို မေးကြည့်ရာ သူက သားဆက်ခြားရန် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါ။ သူ့အနေဖြင့် အသက် ၂၄ နှစ်သာ ရှိသေးသဖြင့် မွေးမည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ် အများကြီး မွေးနိုင်ပေဦးလိမ့်မည်။
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဒေသဖြစ်သဖြင့် စီးပွားရေး ကျဆင်းနေကာ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် အားကိုးလောက်ဖွယ် လမ်းစများက နည်းပါးနေချိန်တွင် စနစ်တကျ သားဆက်ခြားရန် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဒေသတခုလုံးသို့ လွှမ်းခြုံနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါသလဲ။
UNFPA (ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့) က နာဂစ်သင့် ဒေသအတွက် ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁၆၀၀ ကျော်၊ ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာနှင့် ဒေးဒရဲတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု ဂေဟာများအပြင် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်အပြီး တနှစ်တာ ကာလအတွင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်အား စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ဤဂေဟာများက ဆေးရုံနှင့် ဝေးကွာလှသည့် ဒေသများ၌ အသုံးဝင်လှကြောင်း လပွတ္တာမြို့နယ် ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ရဲဝင်းက ပြောသည်။
သို့သော် သားဆက်ခြားရေးအတွက် ဆေးဝါးများ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကာလတွင် အလေးအနက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။
ဘိုကလေးမြို့ပေါ်မှ ဆေးဆိုင်တဆိုင်ကမူ ပဋိသန္ဓေ တားဆေးများမှာ အရောင်းရဆုံး ဆေးတမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
မလွင်လွင်ကမူ စီးပွားရေး အဆင်မပြေသည့် ကြားကပင် ကလေးတားရန် စိတ်မကူးပေ။
သူက “အဆင်မပြေတာတော့ အဆင်မပြေတာပေါ့။ ကလေးတားဖို့တော့ စိတ်မကူးပါဘူး။ ကြုံသလိုပါပဲ” ဟု ဆိုပါလေသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 3:10 AM2comments:
ပိုလန်နိုင်ငံ ဝါဆောမြို့၌ ကျင်းပသော ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ဂရက်သို့ “Request to the White Pigeon” (ချိုးဖြူသို့ ပန်ကြားချက်) ကဗျာ တပုဒ်ကို တင်သွင်းပေးပို့ခဲ့သေးသည်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ညီညွတ်ရေးအတွက် လည်း “Lotus in Clear Water” ဝတ္ထုဖြင့် တာဝန်ကျေခဲ့သည်။
၁၉၈၄ - ၈၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က နိုင်ငံရေးလောကတွင် လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားကာ အချင်းချင်း ကွဲပြဲ နေသည့် ကာလ၌ ဆရာကြီး၏ အရေးအသားကို စိတ်ကူးယဉ်စာပေသစ်၊ သရုပ်ပျက် စာပေသစ်ဟု ရေးကြသည်။
ဆရာဦးဝင်းတင်က ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာကိုပေးခဲ့ဖူးသည့် Philosophy of revolution စာအုပ်ကို ဆရာကြီးက “နာဆာရဲ့ အိပ်မပျော်သော ညများ” အမည်ဖြင့် ဘာသာပြန်ခဲ့သည်။
“အဲဒီစာအုပ်ဟာ မတရား အာဏာသိမ်းတဲ့ အာဏာရှင်တယောက် ခံစားရတဲ့ စိတ်ဝေဒနာကို ပြချင်တာပဲ” ဟု ဦးဝင်းတင်က သူပေးခဲ့သည့် စာအုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အမှတ်တရ ပြောပြသည်။
အာကာမိုး၏ A mirror of Burmese history ကို အေးချမ်းမြေ့က ဆီလျှော်အောင် ပြန်လည် ရေးသားသည်။
Kasairinkaikoen (near Disney Land and Disney Sea)
ဂျီတော့မှတစ်ဆင့် ၊ မြန်မာပြည်သို့ဖုန်းမက်ဆေ့ပို့လို့ရပြီ
မေ ၂ ၊ ဆောအူးလ် ။
Gtalk ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်း Message ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်*gtalk ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဖုန်းMesge ပို့ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီက ပို့ကြည့်တယ် လွယ်လည်းလွယ်တယ်။ ၁၀မိနစ်လောက်တော့ စောင့်ရတယ်။ ပို့ချင်သူများ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ။
အရင်ဆုံး ကိုယ့် Gtalk မှာ gtalk@etmsms.com
လို့ invite(add) လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်ဂျီတော့စာရင်းမှာ gtalk@etmsms.com အမည်တစ်ခု online ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
http://talk.etmsms.com/ ယူအ်ာရ်အယ်လ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာ တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီမှာ သည် ဂျီတော့မက်ဆေ့ အကြောင်း ၊ သိချင်တာတွေ ဆက်လေ့လာလို့ရပါသဗျ ။
sms နဲ့ ဖုန်းနံပတ်အကြားမှာ Spacebar ခံရပါတယ်။
ဖုန်းနံပတ်နဲ့ hello အကြားမှာ spacebar ခံရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
country code ခံစရာမလိုပါဘူး။ 095212345 ဆိုတာနဲ့ရပါပြီ။
(ကျွန်တော်အခုရေးလိုက်သော ဖုန်းနံပတ်မှာ စိတ်ကူးထဲက ဖုန်းနံပတ်တွေပါ။ တစ်ကယ်လို့ တိုက်ဆိုင်ပြီး ဖုန်းနံပတ်တူနေရင် ခွင့်လွတ်ပါ။)
အမယ်မယ် ၊ ကိုယ့်အကောင့်မှာ ၊ လက်ကျန်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတာတွေလဲ ကြည့်လို့ရသဗျ ။
လမ်းညွှန်စာသားများကို ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်ဖြင့် ဖတ်ရှုလိုပါက-ဒီမှာနှိပ်ပါ (ဟောဒီမှာ)
အီးမေးလ်ဖြင့် ဝမ်းသာအားရ အကြောင်းကြားလာသော ကိုကျော်ခိုင်ဝင်း(မိုးညှင်း) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:51 AM No comments:
Pakistan Taliban Nuclear Weapons Fears
There is growing concern in The Pentagon that the rise of the Taliban in Pakistan could threaten the country's nuclear arsenal. Alex Crawford reports.
မြန်မာရေနံအင်ဂျင်နီယာများ၏ကိုယ်စား ဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်။ ဤအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ရေနံအင်ဂျင်နီယာများ၏ စည်းလုံးမှုကိုပြသရာ ရောက်စေပါသည်။
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဒေသ စောင့်ရှောက်မည့် နာဂစ် မျိုးဆက် သ...
Kasairinkaikoen (near Disney Land and Disney Sea)...
ဂျီတော့မှတစ်ဆင့် ၊ မြန်မာပြည်သို့ဖုန်းမက်ဆေ့ပို့လု...